फेसबुकमा समाचार शेयर गर्ने र पढ्नेहरुलाई दुखद खबर | Kendrabindu Nepal Online News
31412007 967543 7441635 23002829
फेसबुकमा समाचार शेयर गर्ने र पढ्नेहरुलाई दुखद खबर
२९ पुष २०७४, शनिबार ११:५०
काठमाडौँ, २९ पुस । तपाई फेसबुकमा समाचार शेयर गरेर भिजिटर बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? अथवा फेसबुकबाटै समाचार पढ्ने बानी छ ? उसो भए तपाईका लागि दुखद खबर छ ।
फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत परिवार र साथीसँग कुरा गर्ने सामग्रीमा जोड दिनेगरी परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन।फेसबुक परिवार र साथीसंग कुरा गर्ने सामग्री भन्दा व्यवसाय, ब्राण्ड र मिडियाको पोष्टलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम बनेको गुनासो बढेपछि यस्तो परिवर्तन गर्न लागिएको जुकरबर्गले लेखेका छन।
‘व्यवसाय, ब्राण्ड र मिडियालाई पोस्टको कम महत्व र यसको सट्टा परिवार र साथीसँग कुरा गर्ने सामग्रीमा जोड दिनेगरी परिवर्तन गर्न लागिएको हो’ उनले लेखेका छन। उनका अनुसार अब फेसबुकमा परिवारका सदस्यसँगको साथीसँगको सम्वादलाई प्रोत्साहित गर्ने सामग्रीमा जोड दिइनेछ ।
नयाँ परिवर्तनले फेसबुकमार्फत आफ्नो पोस्टलाई बढीभन्दा बढी मानिससम्म पुर्याउने संस्थाहरुको लोकप्रियतामा भने कमी आउनसक्ने उनले स्वीकार गरेका छन्। फेसबुक प्रयोगकर्ताबाट सार्वजनिक सामग्री, व्यवसाय, ब्राण्ड र मिडियाबाट भइरहेका पोस्टहरुले व्यक्तिगत क्षणहरु कम्जोर बनाएको प्रतिक्रिया पाएको उनले जनाएका छन। मानिसहरुको भावनालाई एकअर्कासंग जोड्नका लागि फेसबुकले नेतृत्व गर्नेगरि परिवर्तन गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन।
जुकरबर्गले फेसबुकको दुरुपयोग रोक्न र प्रयोगकर्ताको समयको सदुपयोग गर्न महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागेको स्पष्ट पारेका छन। पछील्लो समय प्रचारको माध्यम बनेको लाइभ भिडियो फिडको उदाहरण दिँदै जुकरबर्गले भने– मलाई विश्वास छ कि यी परिवर्तनले फेसबुकसँग जोडिरहन मानिहरुलाई कम खर्च गर्नुपर्नेछ। उनले परिवर्तनपश्चात मानिसहरुले फेसबुकमा खर्च गर्ने समय अधिक मूल्यवान हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
Prevमुख्य माग सम्बोधन नहुँदै डा. केसीले किन तोडे अनसन ?
आठ क्विन्टल औषधिसहित जाजरकोट पुगे सांसदNext